Date My Pet » 3 Tips nokuti An Amazing Relationship
3 Tips nokuti An Amazing Relationship
Last updated: Sep. 23 2020 | 2 Maminitsi verenga
Relationships ndivo kupfuura incredible chinhu chatinogona kuva. Asi kufanana zvose zvinhu zvinokosha muupenyu ivo inoda yakawanda basa. Tinofanira kuita basa nechokwadi kuramba mubatanidzwa wedu anoshamisa. Asi chinhu chakanaka ndechokuti ane kuchinja shoma nyore tinogona nechokwadi nani uye zvikuru kukosha ine mufaro mubatanidzwa pakati pedu uye mumwe watinoda. Pano kunongova zvitatu kumuromo kubatsira kuchengetedza ukama huru:
Kukurukurirana chinhu chinokosha chipi ukama. Taura uye kubudirana pachena nomumwe wako. Kana usingagoni kuva pachena mudiwa wako pashure vose Ungava pachena? Ita kuti vazive kuti unonzwa, Zvisinei risingadiwi sei uchinzwa angava, uye kuvatendera kuenda ikoko. Zvakaipisisa chinhu chaungaita ari kuchengeta zvinhu kare uye ipapo makore pasi mutsara zvachose putika pamusoro chinhu unofanira akati apfuura. Kana mumwe munhu anokuda zvechokwadi ravachanoita kushanda kuburikidza zvose nemi, kunyange kana kunovaitira nguva. Iva akatendeseka uye pakupedzisira iwe kuchawedzera pedyo pane mamwe kunze.
Ramba The Sexual Divi Zvinhu Kuenda Strong
Pashure pechinguvana pabonde rutivi ukama vanogona kutanga kuderera kubva pamazuva apfuura apo iwe vasingagoni kuwana zvakakwana mumwe. Ratidza wamaida kuti uchiri chaizvo okubereka ari vatenge seksikäs andapeni kana kunyange chete nokuita kwako make-imwe nzira. Red muromo. Smoky ziso. Vaitei vachiri kuda nokuti vachiri kuita pasi payo zvose.
Ndakaverenga kufambidzana nyaya dzakawanda apo vanhu vanoti unofanira kuvaitira kureva kuti varambe Chinomufadza. Kunoratidzika saka chakaipa kwandiri. Shure kwezvose, chii chinhu vanhu vakawanda vanoti vari kutsvaga? Pamwe uchifara, munhu mutsa sokuti kuva mhinduro zvikuru nevanhu. Uye dzimwe nguva ndinofunga kuti ndizvo zvakaipa pamwe kudanana dziva. Kune vanhu vakawanda takapfeka chokuzvivanza ichi kumisa pachavo akatarira sezvinoita doormat. Mutsa sokuti ndine REP akaipa sezvo simba apo chokwadi chiri chakasimba chokushandisa yako kana totaura ukama. Ushamwari zvinobva munhu akapfava, mutsa uye ndiani waunoziva kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka hazvigoni outdone. Saka mutsa mumwe wako uye vachanditema kupindurwa mutsa. Kana vakasadaro ipapo havana kukodzera nguva yako. Havaiti kunge munhu akadzikama munhu ari wose uye rudo ichasvika pamukova wako uye zvichava nani pane nokusingaperi akafungidzira kwauri nokusingaperi aigona kuva.
pamusoro 6 Zvikonzero Sei Cooking zviri Hot kuti Romance
Zvokuita On A First Date By Zodiac Sign